Ukwenza umdlalo kwisitya seDior: ixabiso elihle lentwasahlobo
Iimodeli kunye neDior ibonisa ngokungahambi ngokugqithiseleyo ingqwalasela yomoya: ukucacisa isikhumba, i-smokey elula, imilomo ephinki. Abaculi bezinto zokwenza i-share share yindlela yokwenza umenzi-mveliso-ngoku unokuphinda uphinde "umfanekiso wezithunywa zezulu".
"I-watercolor" ukwakheka kweDior kugxininisa ukuphakama kwezixhobo
Ikhumba elingenakwenzekayo liyisiseko sokwenza kakuhle. Sebenzisa i-primer elula okanye isiseko ukulungelelanisa ukukhulula nokulungiselela ubuso ukufaka isiseko. Musa ukulibala malunga nomlungisi wombala - i-concealer eluhlaza izakufihla ukucaphukisa kunye nokubomvu, ipayipi - izibonda ezimnyama phantsi kwamehlo kunye nezwi elincinci. Ngenisa ngokucwangcisa i-tile ye-tonal, ukuba kunyanzelekile, yongeza izikhalazo ezintle ngoncedo lwe-blush-kwii-cheekbones kunye namahlama e-apula. Bhekisela emuva kwindlala ye-haylayterom kunye ne-dimple ngaphezu komlomo ophezulu. Yenza umququzelelo ngesigqubuthelo esibonakalayo esifubeni - siya kususa i-gloss yesikhumba kwaye ulondoloze ukutsha kwetoni ixesha elide.
Ukubunjwa kwemvelo kweDior: i-fresh and elegant
Amehlo kufuneka ahlaziye kwaye ahluke kunye nesikhumba. Faka isicelo se-primer kwiinkophe, uze wenze i-smokey enobunzima, uguqule ngokugqithiseleyo umbala. Khetha i-shade yegrey, i-malachite, i-lilac okanye umthunzi we-chocolate wegolide. Yenza amaconsi kwaye unike umthamo wemvelo kwi-eyelashes ngoncedo lwezidumbu zobomnyama, obomvu okanye obomvu. Gcwalisa isikhala sokubambisana nge-liner, ukongeza ukuvakalisa ukujonga.
Amehlo - ukugxilwa okusemgangathweni ekwenzeni i-Dior
Lungisa umlomo womlomo kunye ne-kayal yenkampani. Kwikhumba elimanzi lomlomo, sebenzisa i-balm-gloss okanye i-matte lipstick yombala wepinki wendalo.
Izindebe ezibomvu zincinci - ukugqiba umnxeba
I-Disco glamor: umgca we-makeup NARS Audacious Chic Out Fall 2016
Iimveliso zokudlala ngothando
Imithetho emi-4 yokulungiswa komnyaka omtsha: kubalulekile ukwazi!
Ukudibanisa umbala we-blush kunye namehlo
Ubungqina buka-Angelina Jolie
I-tattoo ye-eyebrow: luhlobo luni olukhethekileyo
Iiprotheni kumchamo womntwana
Imfashini yefestile kwiintlanzi ze-stylish
Ibhinqa loshishino kunye neengxaki zeentsapho
Ubugcisa bokuthanda nokuphumelela
Izilwanyana ezizithandayo zeenkwenkwezi zaseHollywood
Kutheni abatshatileyo bexabana ngaphezu kwezihlwele
Yintoni ukuhlaziywa kwixesha lesigqirha?
Ukuzivocavoca ukuqinisa izihlunu ezinobunzima
Inhlama emfutshane yaseSwitzerland
Indlela yokukhetha amakhethini alungileyo kwigumbi
Iioli eziyimfuneko kunye neempawu zabo zonyango
I-Openwork ibhokisa i-crochet
Ukuhlaziywa kwefilimu "UHitler, uCaput"
Uncedo olungcono kwi-autumn melancholy